को हुन् एमाले पार्टी दर्ता गराउने सन्ध्या तिवारी ? | Ratopati
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मंगलबारको स्थायी समिति बैठकको नियमित एजेण्डा थियो– सीमा समस्या र समाधान ।
त्यसपछि अर्को विषय थियो कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण । तर पूर्व निर्धारित उक्त एजेण्डा नै ओझेलमा पार्ने अरु दुई एजेण्डा थपिए, मंगलबारको बैठकमा । फरक एजेण्डा थपिनुमा विगत दुई दिनयताका केही घटनाक्रमहरु जोडिएका छन् ।
जस्तोकी प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले असार १४ गते आफूलाई हटाउन भारत सरकार, नेपालस्थित भारतीय दुतावास र आफ्नै पार्टीका नेताहरु नै लागिपरेको बताउनु । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात सोमबार फेरि अर्को घटनाक्रम विकास भयो । त्यो थियो–निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गर्न निवेदन पर्नु ।
यसरी जवाफ माग्नेहरुमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल लगायत मंगलबार बोल्ने १८ जना थिए । यसक्रममा नेताहरुले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ओली असफल भैसकेकाले राजीनामा माग गरे ।
को हुन् एमाले दर्ता गर्न जाने सन्ध्या ?
बैठकमा नेताहरुले नेकपा एमाले नामक पार्टी दर्ताका लागि निवेदन कसले दियो ? यसमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता छ छैन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलेलाई प्रश्न गरे । तर ओलीले त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिएका थिए ।
तर ओलीको जवाफमा नेताहरुले विश्वास गर्न सकेनन । उनीहरुले पार्टी दर्ता गर्न जाने व्यक्ति ओलीकै निकटको हुनुपर्ने र झापाकै हो कि भन्ने अनुमान लगाए । तर बुझ्दै जाँदा सन्ध्या तिवारी नामकी महिला झापाकी नभएर उनको ठेगाना विराटनगर रहेको खुलेको छ ।
उनी अध्यक्ष रहेको उक्त पार्टीका महासचिव जनकपुरका मनिष (थर खुलाइएको छैन) रहेका छन् । ‘सन्ध्यासहित २१ जना पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिन सोमबार साँझ कार्यलय आउनु भएको थियो’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।